Sirna maatii addaan baasuuf garaa rifatu hin qabnu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSirna maatii addaan baasuuf garaa rifatu hin qabnu!
Kun jaala Gammachuu Ayaanaa ti. Mucaa isaa waggaa sadiitti dhiisee qabsoo bilisummaatti seeneen dhiheenya walargee ture. “Anaa waggaa sadii na dhisee qabsootti deeme; waggaa18 booda wal argine!” jette Meeroon Gammachuu Ayyaanaa. Ijoolleen jaalala maatii amlee guddachuun ulfaataa dha. Kan Meeroo immoo waanti dachaa godhu gadda biraa jira. “Ani harmee koos ijoollummaattin dhabe. abbaa maleen guddadhe.” jetti Meeroon.
Amma illee gaddi sun irraa hin dhaabbanne. Yeroo silaa gammachuun abbaa ishii waliin dabarsitu, sababa sirna badaa Itoophiyaa qabee jiruun dhabdee jirti. “Ani jaalala Abbaa koo utuun argee sirnaan hin dhandhamin ammas narraa hidhan; amma illee mana hiraarsaa jira!”
Kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kun maatii Oromoo keessatti kitilaan lakkaayamu. Sirni Itoophiyaa Oromoo nyaachuu erga jalqabee jaarraan tokkoo fi jaarraan walakkaa kuteera. Itoophiyaan Oromoo nyaachaa jirtus nagaa fi tasgabbiia rgattee hin jirtu.
Maatiin Oromoos qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dabalamuun wareegama ulfaataa baasuu hin dhiifne. Qabsoon Oromoo galii isaa waan hin geenyeef, Oromoo fi Oromiyaan dararaa hamaa keessatti argamu.
Goototni keenya akka Jaal Gammachuu Ayyaanaa fa’aas jaala maatii, jaalala firaa fi nageenya biyyaa dhabanii rakkootti jiru. Rakkinicha keessaa kan Oromoota mara baasu akkuma Itoophiyaan Oromootti garaa jabaatte, Oromoonis Itoophiyaa irraa garaa kutatee adda bahuu qaba.
Sabni keenya biyya Oromoo nyaattutti yoo garaa hin jabaanne, nagaa fi bilisummaan akka laaftuutti harka keenya gahuu hin danda’u! Gaafa biyyattii dullattii sana irraa garaa kutanne garuu dubbiin marti salphaa dha. Gootota jireenyi dhuunfaa hin mo’anne qabna!
Koloneel Gammachuu Ayyaana baga nagaan baate goota gantuufi gadheef gadi hin jenne.
Intala kee waliin baga nagaan wal agarte.